Mucjisada Magaalo Ku Taala Sucuudi Carabiya Oo Lagu Sheego Inay Ahayd Magaalo Habaar Qabta | Foore News
Home Arimaha Diinta Mucjisada Magaalo Ku Taala Sucuudi Carabiya Oo Lagu Sheego Inay Ahayd...
Mucjisada Magaalo Ku Taala Sucuudi Carabiya Oo Lagu Sheego Inay Ahayd Magaalo Habaar Qabta
Riyad, September 17, 2020- (Foore)- Hegra waa magaalo taariikhi ah oo ku taalla waqooyiga-galbeed ee Gacanka Carbeed. Meeshan oo ka tirsan waddanka Sacuudi Carabiya waxaa lagu arkaa waxyaabo iyo raadad ku taariikhyesan xilli aad u fog. Qabaa’il ayaa goobtan ku noolaan jiray kunkii sano ee ugu horreeyay taariikh xisaabeedka Dhalashadii Nabi Ciise ka hor (CS).
Laakiin waxay aad caan ugu tahay haraadiga dadkii boqortooyada madaxa bannaaneyd ee Nabataean-ka iyo qabuuraha dhismaha layaabka leh loo sameeyay ee ku yaalla dhulka lamadagaanka ah. Boqortooyadaasi waxay jirtay qarnigii ugu horreeyay ee taariikh xisaabiyaha BC. Jerome Rohmer, waa khabiir ku xeel dheer taariikhda dadkii hore.
Isagoo sharraxaad ka bixinaya waxyaabaha lagu xasuusto goobtan ayuu yidhi: “Dabayaaqadii qarnigii 1-aad ee BC, dadka loo yaqaanno Nabataean-ka ayaa halkan yimid, oo soo dagay Hegra waxayna horumariyeen magaalada, xilligaasna waxay u badan tahay inuu maamulayay mid ka mid ah boqorradoodii ugu waaweynaa ee la odhan jiray Aretas-kii afaraad. Dadkani waxay goobtaas uga tageen dhammaan qabuurahoodii waaweynaa.”. Markii ay taariikhdu isbaddaleysay, magaaladan waxay ahayd qeybta ugu muhiimsan dhinaca koonfureed ee boqortooyadii Nabataean-ka, sida uu sheegay Rohmer. “Waxaa lagu tilmaami karaa inay ahayd caasimaddii koonfureed ee boqortooyada Nabataean, halka caasimaddooda ugu weynna ay ahayd Petra oo hadda loo yaqaanno Urdun,” ayuu yidhi.
Muddo aad u dheer ayey dadku aaminsanaayeen in Hegra ay tahay meel habaaran. Sida laga soo xigtay sheekooyinka taariikhiga ah, dadka halkaas dagganaa waxaa si gaar ah ugu dhici jiray dhul gariirro iyo danabka roobka ama jacda, sababtoo ah waxay caabudi jireen asnaam. Markii ay boqortooyadii Roomaanka qabsatay halkaas, Hegra waxay noqotay magaalo ka tirsan xukunkii Roma.
Wax badan lagama oga waqtigii intaas ka dambeeyay, marka laga reebo in dadkii Nabataean-ka ay sii dabar go’een. Badda Cas ayaa qaadatay inta badan dhulkaas, wuxuuna noqday marin ganacsi oo muhiim u ah dunida. Kaddib Roomaaniyiintii waxay ka door bideen inay magaalooyin kale dhistaan. Maanta, Hegra waa goob taariikhi ah oo ay maamusho hay’adda Unesco, waxaana loo tagi karaa dalxiis.
Previous articleDaanyeer Halis Ah Oo Wiil Yar Dhabta Hooyadii Kala Cararay Kadibna Dilay
Next articleDa’da Dumarku Ay Ku Dhalmo Daayaan Ma La Kordhin Karaa? – Tijaabooyin Caafimaad